Sida loo Cabiro ROI ee barnaamijyada moobilada | Martech Zone
Talaado, Disembar 9, 2014 Douglas Karr
Waxaan la shaqeyneynaa shirkad bah wadaag ah oo ku saabsan sameynta barnaamij mobilada loogu talagalay Android iyo iOS hadda. Intii aan sameynay barnaamijyadeenna gaarka ah, barnaamijkan qaaska ah wuxuu u baahan yahay xoogaa feejignaan ah intii aan filaynay. Waxaan u maleynayaa inay waqti dheer ku qaadaneyso ka shaqeynta suuqgeynta, soo gudbinta, iyo daabacaadda dalabka mobilada marka loo eego waqtiga horumarinta barnaamijka! Xaqiiqdii waan hagaajin doonnaa waxyaabaha laga filayo shaqadan oo kale mustaqbalka.
Barnaamijkani waa bedel codsi macmiil u dhisay kalkuleytar macaamiishooda - inta badan injineerada. Waa codsi aan macno lahayn oo ka caawiya injineerada inay si fudud kumanaan xisaab oo kala duwan u sameeyaan. App ma sameeyo iibiyo wax kasta oo aan qiimaha wax kasta. Codsiga waxaa si fudud loogu bixinayaa macaamiisha. Soosaarida aaladaha sidan oo kale ah si ay shaqooyinka ugu fududeeyaan dadweynuhu waa istiraatiijiyad weyn oo suuqgeyn ah maxaa yeelay waxay ku celcelinaysaa taabashada macaamiisha si aad maskaxda ugu hayso maskaxda markay u baahan yihiin alaabadaada ama adeegyadaada.
Codsi beddel ahaan, farqiga aan aqoonsannay (oo ka baxsan xisaabinta qaar khaldan) waxay ahayd inaysan jirin wax is-dhexgal ah oo ku saabsan adeegga moobiilka ee u dhexeeya shirkadda iyo isticmaalaha. Markaa waxaan ku darnay xiriir fudud iyo tilmaamaha-riix-ka-hadalka, iyo sidoo kale inaan ku soo jiidannay Youtube-kiisa fiidiyowyada ah iyo qoraalladooda ugu dambeysay. Adoo ku riixaya quudintaas isticmaaleha, barnaamijka moobiilka wuxuu hadda bixiyaa albaab aad u fiican oo la hagaajiyay si loo dhiso dib-u-celin wanaagsan oo ku saabsan maalgashiga oo laga yaabo in xitaa laga helo iibsi toos ah isticmaalka.
Haddii aad diirada saareyso abaabulida macaamiisha ama shaqaalaha, muuqaalkan wuxuu daboolayaa dhamaan aasaaska: qeexida yoolalkaaga, qiimeynta qarashaadka, u xilsaarida KPIs, iyo gaarista xisaabinta ROI ee qabow, tirooyin adag. Ka gudub istiraatiijiyad leh qiyaaso iyo isleegyo cadeynaya in dhaqdhaqaaqa ganacsigu si dhab ah isu kordhinayo. Jason Evans, SVP, Istaraatiijiyadda & Maareynta Hindisaha
Tani infographic laga soo qaado Kony wuxuu ku dhex maraa suuqleyda dhammaan dhinacyada kala duwan ee xisaabinta Soo-celinta Maalgashiga ee soo saarista dalabka moobiilka iyadoo la adeegsanayo habka NPV (Qiimaha Joogtada ah ee Net). Wixii macluumaad dheeraad ah, hubi inaad soo dejiso Warqada Cad ee Kony Qiyaasta Mobilada: Tirinta Guusha Hindisahaaga Moobiil.
Tags: infographicqarnihelitaanka barnaamijka moobiilkakharashka barnaamijka mobiladayoolalka barnaamijka moobiilkamobilada kpisheerka haynta abka mobiladamobi app roisoo celinta dalabka moobiilkahorumarka mobiladasaamaynta mobiladataleefanka gacantahelitaanka hogaanka mobiladamobilada tcosaafiga saafiga ahnpvku soo noqo maalgashigawadarta qiimaha lahaanshaha
Websaydhkaagu Maahan Mashruuc
10, 2014 at 10: 22 PM
Wanaagsan infographic, waad ku mahadsantahay shaqadaada.